छायामा परेकी भानुमति ! - Kendrabindu Nepal Online News
छायामा परेकी भानुमति !
२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार १२:४३
दुर्योधनकी श्रीमती हुन् भानुमति । भानुमति काम्बोज नरेश चन्द्रबर्माकी छोरी थिइन् । उनको रोमरोममा आर्यस्त्रीयोचित समस्त गुण भरिएको थियो । उनी अप्रतिम सौन्दर्यकी धनी थिइन् ।
एकपटकको कुरा हो, राजाले भानुमतिको विवाहका लागि स्वयंवर समारोह आयोजना गरे । स्वयंवरमा शिशुपाल, जरासन्ध, रुक्मी, दुर्योधन, कर्ण आदि भारतवर्षका अनेकौं राजाहरू निमन्त्रित थिए ।
भानुमति हातमा वरमाला लिएर आफ्ना दासी एवं अंगरक्षकहरूसँग आइन् । स्वयंवरका लागि एक एक गर्दै राजाहरूलाई नियाल्दै अघि बढ्न थालिन् । दुर्योधन भानुमतिले आफूलाई वरमाला पहिराऊन् भन्ने चाहन्थे तर त्यसो भएन ।
आफ्नो नजिकबाट भानुमति अलिकति अघि मात्र के बढेकी थिइन् दुर्योधनले झम्टँदै गएर उक्त माला खोसी आफ्ना घाँटीमा आफैंले लगाए । यस्तो अप्रत्यासित घटना हुनेबित्तिकै त्यहाँ उपस्थित राजाहरूले तरबार निकाले । दुर्योधन कत्ति पनि हडबडाएनन् । उनले ती सबै राजालाई कर्णसँग लड्न चुनौती दिए । लडाइँ मच्चियो । कर्ण एक्लैले ती सबै राजाहरूलाई पराजित गरिदिए ।
भानुमतिलाई लिएर हस्तिनापुर आइसकेपछि दुर्योधनले यो कार्यलाई के भनेर उचित ठहराए भने भीष्म पितामहले पनि आफ्ना सौतेनी भाइ विचित्रवीर्यका लागि काशीनरेशका छोरीहरू अम्बा, अम्बिका र अम्बालिकालाई हरण गरेर ल्याएका थिए । यो तर्क सुनेपछि भानुमति पनि दुर्योधनसँग सहमत भइन् । दुर्योधन र भानुमतिको विवाह धुमधामले भयो ।
दुर्योधन र भानुमतिका दुई सन्तान भए– छोरो लक्ष्मण र छोरी लक्ष्मणा । लक्ष्मण महाभारतको युद्धमा अभिमन्युको हातबाट मारिए भने लक्ष्मणाको विवाह कृष्णको छोरो साम्बसँग भएको थियो । स्वयंवरमा लक्ष्मणाले साम्बलाई वरमाला पहिराइन् । यो कुरा कौरवहरूलाई मन परेन । उनीहरूले साम्बलाई बन्दी बनाए । यसैका कारण यादव तथा कौरवहरूका बीच लडाइँसमेत हुन खोजेको थियो । तथापि बलरामको प्रयासमा लडाइँ टरेको थियो ।
भानुमति र कर्णबीच यस्तो भयो
भानुमति र कर्णका बीच गहिरो मित्रता बसेको थियो । उनीहरूबीच कृष्ण र द्रौपदीको जस्तै मित्रवत् सम्बन्ध थियो । दुवै असल मित्र थिए र यो कुरा हस्तिनापुरमा लगभग सबैलाई थाहा थियो । एकपटकको कुरा हो– भानुमति र कर्ण बुद्धिचाल खेलिरहेका थिए । खेलमा कर्ण जितिरहेका थिए । त्यतिबेलै भानुमतिले दुर्योधन त्यहाँ आएको देखिन् र उठ्ने कोसिस गरिन् । कर्णलाई दुर्योधन आएको थाहा भएन, उनलाई लाग्यो भानुमति खेलमा हारिरहेका कारण उठेर भाग्न खोजिरहेकी छिन् । कर्णले उनलाई समातेर बसाउन खोजे । यो क्रममा भानुमतिको मोतीको माला कर्णको हातमा आएर चँुडियो ।
त्यतिबेलासम्म दुर्योधन पनि त्यहीँ आइपुगेका थिए । दुर्योधनले अनावश्यक शंका गर्ने हुन् कि भनेर भानुमति र कर्ण दुवैजना डराए । उनीहरूले केही बोल्न सकेनन् । दुवैजना अन्यमनस्क भएर उभिइरहे । । तर दुर्योधनलाई कर्णमाथि पूर्ण विश्वास थियो । उनले छरिएका मोती उठाउन भने र जे कुरा गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ आएका थिए त्यही विषयमा कर्णसँग चर्चा गर्न थाले । दुर्योधनको यही चरम विश्वासका कारण आफूबाट भएको घटनालाई लिएर शंका गरिनबाट कर्ण जोगिए ।
कतिपयले उक्त घटनालाई यसरी पनि वर्णन गर्छन्– दुईजना बुद्धिचाल खेलिरहेका थिए । भानुमति हारिरहेकी थिइन् र कर्ण खुसी भइरहेका थिए । यति नै बेला अचानक दुर्योधन आउन लागेको थाहा भएर भानुमति बसेका ठाउँबाट उठ्न खोजिन् । कर्णले हारेर भाग्न लागेकी हुन् भन्ने ठानेर भानुमतिको पछ्यौराको फेर समातेर बसाउन खोजे ।
अचानक भएको यो घटनामा भानुमतिको पछ्यौरा च्यातियो र त्यहाँ भएको मोती चुँडिएर छरियो । यति नै बेला कर्णले पनि दुर्योधन आइरहेको देखे । कर्ण र भानुमतिको अनुहार लाजले रातो भएको थियो । उनीहरू दुर्योधनले के भन्ने हुन् भनेर डराइरहेका थिए । दुर्योधन नजिक आउँदा पनि दुवैले उनको आँखामा हेर्न सकिरहेका थिएनन् । यत्तिकैमा दुर्योधनले भने मोती छरिइरहन दिन्छौ कि म तिमीहरूलाई सहयोग गरौँ मोती उठाउन ?
भानुमति अत्यन्त सुन्दर, आकर्षक, तीक्ष्ण बुद्धि तथा अत्यन्त बलिष्ठ शरीरयुक्त शक्तिशाली थिइन् । महाभारतको सती पर्वमा गान्धारीले भनेकी छिन्– भानुमति दुर्योधनसँग खेलखेलमा कुस्ती खेल्थिन् जसमा उनी दुर्योधनलाई सजिलै पछारिदिन्थिन् । महाभारतको युद्धपछि भानुमतिलाई पति दुर्योधन तथा छोरो लक्ष्मणको मृत्युको गहिरो धक्का लागेको थियो । कुनै महाभारतमा महाभारत युद्धपछि भानुमतिले अर्जुनसँग विवाह गरिन् भन्ने प्रसंग पनि पाइन्छ ।
कर्ण, बुद्धिचाल, भानुमति
Prevफ्राइडे फिल्म: ‘साइनो’ लाई ‘रे’ र ‘काँचुली’को टक्कर
काठमाडौंको स्वयम्भूमा प्रहरीले गोली चलायो, १ जना घाइतेNext